“တနိုင်ငံလုံးမျှော်နေတဲ့….. ရွှေမိုးလာပါပြီ” – ရှအေလငျး
၁၉ ၅ ၂၀၁၉ရက်​ မနက် နိုင်ငံအောက်ပိုင်းကို စတင် ၀င်ရောက်လာတဲ့ မိုးဟာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိတ္ထီလာ ကျောက်ပတောင်းအထိ တက်လာပြီး နေရာကွက်ကြား ရွာသွန်းကာ..
၂၃ရက်​​နေ့မှာ​တော့ တပြည်​လုံး အနှံရွာသွန်းပြီး ​အစိမ်း​ရောင်​ အနီ​ရောင်​​များက​တော့ နေရာကွက်​ပြီး မိုးထစ်​ချုန်းရွာနိုင်​​သော​ဒေသများဖြစ်​ပါတယ်​။
မေလကုန်​သည်​အထိ ရက်​ဆက်​ရွာသွန်းမယ့်​အ​ခြေအ​နေပါနိုင်​ငံ​တောင်​ပိုင်း ​မြောက်​ပိုင်းများ ​ရေကြီး​ရေလျှံ နိုင်​​သော​ကြောင့်​ လမ်း တံတားများ အထူးသတိထားရပါ့မယ်​.
အလယ်​ပိုင်း​ဒေသများ မိုးရွာလိုက်​ ​နေပူလိုက်​နဲ့ အ​နေခက်​မယ်​..
ယခုရွာမယ့်​မိုးသည်​ ​ရေအားလျှပ်​စစ်​မီးအတွက်​ ​ကောင်းနိုင်​​ပေမယ့်​ မိုးရွာရင်​ မီးပျက်​တတ်​တဲ့ လိုင်း​တွေ ကြိုပြင်​ထားသင့်​ပါ​ကြောင်း အကြံပြုပါရ​စေ…
အလည်​အပတ်​ ဘုရားဖူးခရီးသွားများအတွက်​ အခက်​အခဲ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်။
၁၉ ၅ ၂၀၁၉ရကျ မနကျ နိုငျငံအောကျပိုငျးကို စတငျ ဝငျရောကျလာတဲ့မိုးဟာ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ နိုငျငံအလယျပိုငျး မိတ်ထီလာ ကြောကျပတောငျးအထိ တကျလာပွီး နရောကှကျကွား ရှာသှနျးကာ..
၂၁ ရကျနမှေ့တော့ရှမျးတောငျ ကယား နဲ့ နပွေညျတျောမှ အောကျပိုငျးဒသေမြား သဲသဲ မဲမဲရာံသှနျးမှာဖွဈလို့ ရနျကုနျသားမြား မွောငျးရှငျးထားကွဘို့လိုကွောငျးပါ..
အိမျ အမိုးပွငျနသေူမြားလညျး နကျဖနျ ၂၀ ရကျ အပွီးပွငျထားကွပါဗြာ….
၂၃ရကျနမှေ့ာတော့ တပွညျလုံး အနှံရှာသှနျးပွီး အစိမျးရောငျ အနီရောငျမြားကတော့ နရောကှကျပွီး မိုးထဈခြုနျးရှာနိုငျသောဒသေမြားဖွဈပါတယျ။
မလေကုနျသညျအထိ ရကျဆကျရှာသှနျးမယျ့အခွအေနပေါနိုငျငံတောငျပိုငျး မွောကျပိုငျးမြား ရကွေီးရလြှေံ နိုငျသောကွောငျ့ လမျး တံတားမြား အထူးသတိထားရပါ့မယျ.
အလယျပိုငျးဒသေမြား မိုးရှာလိုကျ နပေူလိုကျနဲ့ အနခေကျမယျ..
ယခုရှာမယျ့မိုးသညျ ရအေားလြှပျစဈမီးအတှကျ ကောငျးနိုငျပမေယျ့ မိုးရှာရငျ မီးပကျြတတျတဲ့ လိုငျးတှေ ကွိုပွငျထားသငျ့ပါကွောငျး အကွံပွုပါရစေ…
အလညျအပတျ ဘုရားဖူးခရီးသှားမြားအတှကျ အခကျအခဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
တခါမှမမျှော်လင့်ထား ဖူးတဲ့ စာတွေ ရေးသားထားတဲ့ ဘောလုံးအင်္ကျီကို...
ရှင်ရက်နဲ့သေနေသလို ငရဲပမာဖြစ်နေတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားအကြောင်းကို ပြောပြတဲ့...